Ihichapụ data si iOS ngwaọrụ bụ maa bụghị dị mfe dị ka ihichapụ ihe si Android ngwaọrụ. E nwere ụfọdụ nzọụkwụ na mkpa ga-agbaso. Ndị akacha eji software ka ihichapụ, weghachi, na hazie ọdịnaya na iOS ngwaọrụ bụ iTunes software. Ka na-anya na nzọụkwụ ka ihichapụ data si iPod Nano, iPod ịkpọgharịa, na iPod aka.
Part 1. Olee ikpochapụ data site na iPod Nano
Kasị mma na nhọrọ ikpochapụ data si iPod Nano bụ ọcha ngwaọrụ site na njikọ ya na iTunes na PC gị. Nzọụkwụ mbụ bụ ibudata ọhụrụ version nke iTunes na PC gị. Mgbe ahụ, jikọọ gị iPod Nano ka PC na eriri USB. Ozugbo gị na ngwaọrụ ahụrụ, iTunes ga-egosi iPod management ihuenyo. Mgbe ahụ, họrọ "Weghachi iPod" nhọrọ.
Pop-elu ga-apụta iji gosi bụrụ na ị chọrọ iji weghachi ngwaọrụ gị ma ọ bụ. Dị pịa weghachi. Mgbe ahụ, ọzọ mmapụta ga-apụta na ga-akpali gị imelite software ka ọhụrụ version, na-bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụghị otú.
Pịa na-ekweta na melite ngwaọrụ software. Usoro ga-akpali gị ịbanye gị iTunes ọrụ id na paswọọdụ.
Mgbe e mesịrị, iTunes ga-akpali gị iji weghachi ochie songs na photos. Dị nnọọ uncheck igbe na pịa "ime eme." N'ime minit ole na ole, iTunes ga hichapụ ihe niile gị data gị iPod Nano, na ọ ga-abụ dị ka ọhụrụ.
Part 2. Olee ikpochapụ songs si iPod ịkpọgharịa
Ihichapụ songs si iPod aka bụ nnọọ mfe karịa ihichapụ songs si iPod kpochapụwo, ịkpọgharịa ma ọ bụ iPod Nano. Na-iji ihichapụ songs si iPod ịkpọgharịa, jikọọ ya na gị PC na nwere iTunes arụnyere na ya. ITunes ga-amata na ngwaọrụ gị na sekọnd ole na ole. Mgbe ahụ, na-emeghe nchegbu nchekwa, na ihichapụ achọghị songs otu otu ma ọ bụ ihichapụ ha niile ozugbo.
Part 3. Olee ikpochapụ data site na iPod Omuma
Ọzọ, ihe kasị mma nhọrọ ikpochapụ data si iPod kpochapụwo bụ nanị site ejikọta ngwaọrụ gị na iTunes na kọmputa gị. Ozugbo ị jikọọ gị iPod kpochapụwo na gị PC, iTunes ga ịchọpụta ngwaọrụ gị na sekọnd ole na ole. Pịa na ngwaọrụ aha, mgbe ahụ,, pịa nchịkọta. Mgbe ahụ, pịa "Weghachi." The Iweghachi usoro ga-amalite n'ime sekọnd ole na ole, na ndi nile data na ngwaọrụ ga-ehichapu ya.
Part 4. Olee ikpochapụ akụkọ ihe mere eme na iPod aka
Mgbe na-ere ma ọ bụ inyerịta ochie smart ntị na mbadamba maka ndị ọhụrụ, ihichapụ data si ochie ngwaọrụ a na-ewere ihe ndị kasị mkpa ọrụ. E nwere nnọọ ole na ole pụrụ ịtụkwasị obi software omume na ike ihichapụ data si iPod, iPad, iPhone na ndị ọzọ na iOS ngwaọrụ. Wondershare SafeEraser bụ ihe kasị mma nhọrọ na-pụrụ inyere gị aka gbochie njirimara na-ezu ohi mgbe ere gị ochie mbadamba PC ma ọ bụ smart ekwentị. Dị ka e kwuru na mbụ, software na-adịgide adịgide deletes niile data si iOS ngwaọrụ na-eme ka ọ gaghị ekwe omume iji naghachi ihe ọ bụla e mesịrị. Ọ ezute ọtụtụ na-adịgide adịgide data nhichapụ ụkpụrụ gụnyere mana m-spec DOD 5220 - 22 M. Site photos, onwe data, ehichapụ data, ka faịlụ dị iche iche formats, SafeEraser na ntukwasi-obi deletes ihe niile si ngwaọrụ gị.
SafeEraser nwere ike ọcha gị iPod ma hapụ ohere nchekwa n'ime sekọnd
SafeEraser bụ ma eleghị anya kacha ụzọ wepụ na-achọghị ngwa, dị ọcha ehichapụ faịlụ, ihichapu onwe data, na mpikota onu photos.
Wụnye SafeEraser ngwa na gị PC.
Mepee ngwa. Jikọọ gị iPod aka gị na kọmputa na eriri USB. The SafeEraser software ga ịchọpụta gị iPod aka (ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ iOS ngwaọrụ).
Ọ bụrụ na ị banyere ihe ị na-achọ ka ihichapụ, ị nwere ike ozugbo họrọ ụdị nke data si nhọrọ nyere na isi window. Hover na cursor ọ bụla icon, mgbe ahụ, ọ ga-egosi na data ụdị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ niile data site na ngwaọrụ gị, ị kwesịrị ị họrọ "1-Click nzacha na mkpocha nhọrọ."
SafeEraser deletes niile enweghị isi faịlụ na-eme ka ohere na anyị ngwaọrụ n'ime nanị sekọnd ole na ole. Ozugbo ị ihichapụ data site na iji awara awara dị ọcha-elu nhọrọ, e nweghị ụzọ naghachi na data. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe na-azụ-elu maka otu ihe ahụ.
Cheta, ihe nhicha data site na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na ị na-ahapụ metụtara nke gị data n'ime ngwaọrụ gị mgbe ere ya, mmadụ pụrụ naghachi na na n'ụzọ.
> Resource> Clean-elu> Olee ikpochapụ data site na iPod